China hoodies pullover ine anodhinda yevakadzi fekitori uye vagadziri | Dufiest
hoodies pullover pamwe nekudhinda kwevakadzi
Iro zita rinobva kuna 'Loopwheel', yechinyakare kuruka muchina uyo waimbove wakashandiswa kuruka jira. … Kuva nezvishwe kumashure kweshinda pakutanga kwakarongerwa kubvumira iyo juzi kutora ziya dikita kubva mumuviri wako uye nekupfuudza mukati mehembe kuti ugare uchitonhorera. A juzi inogadzirwa nekotoni inorema. Masweat akaitirwa kuti ugare uchidziirwa munguva yechando. A juzi inoitirwawo kuti urambe uchidziya, kunyange hachisi icho chete chinangwa. Pamwe pamwe nekuchengeta imwe inodziya, ivo vanotorawo ziya sezvatakambotaura nezvazvo pakutanga muchinyorwa.Poshi yenguva dzakanakisa dzekutandara mu juzi kana mamiriro ekunze achinyika. Isu vanokurudzira kudziya mira chando pfekai masweatshirt uine kana isina hoodies. Iwe kupfeka ivo vane sweatpants inodziya zvakaenzana kana sarudza kuvasanganisa nematuru track kana iwe uri kuronga kuwana mune imwe kurovedza muviri.
Yakarukwa sweatshirt hoodie isarudzo inopisa pakati pevanhu pasirese uye inotengeswa nesu pamutengo wepamusoro.Ndisu chete mugadziri uye mutengesi wemitambo kubva kuChina. Isu tinoshandisa jira rakasiyana senge donje, acylic, polyester uye Iyi vakadzi hoodie inowanikwa pamutengo wekutengesa. Vatengi vanogona kutenga hoodie yegorosa muhuwandu hwakawanda AT yemakwikwi mutengo AS AS DUFIEST mitambo inogadzira yakasarudzika kubva kuChina, wholesaler, ekisipota uye fekitori yemitambo, hoodies, track majaketi uye pasi, T-shati, Tangi yepamusoro uye akakwana mapfupi kupfeka. Inogona kushandiswa kune ese epamba uye kushanda muAvhu uye munguva yechando, inova yakapfava uye fashoni.
Vakadzi hoodi sweatshirt kubva kuDUFIEST dhizaini anoshanda kwazvo kumusika wekunze. Sechimiro chisina kujairika chine hutsva kana dhizaini yakasarudzika pane ino yakasimba uye yekotoni-poly musanganiswa furce pullover, ino ichave yako nyowani nyowani yaunofarira.
· Huremu hunorema uye hunogara kwenguva refu hwakagadzirwa ne60% donje / 40% polyester kana yakagadzirirwa
Inosanganisira homwe yepamberi-yakafukidzwa muhomwe yepamberi uye yakatambanudza cuff cuffs uye chiuno
· Classic unisex maitiro
· Muchina wekuwachisa unotonhorera wakaita semavara, kuwira pasi pasi
Yepfuura: cationic machira track jekete zipi hoodie yevakadzi
Zvadaro: hoodies pullover ine hombe kudhinda kune varume